नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, ८५ । पहिलो पुस्ताका नेता सिंह कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाटै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपामा ६५ वर्ष बिताइसकेका छन् । उनको स्थायी ठेगाना प्युठान हो ।
केशरजंग रायमाझीसँगको विवाददेखि कम्युनिष्ट पार्टीको ०१९ सालको पहिलो विभाजनका साक्षी हुन् उनी । त्यसपछि लगातार आएका दर्जनौँ फूट र जुट व्यहोरेका पाका नेता हुन् । ०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन गरी नेकपालाई संगठिन गर्ने प्रमुख नेता पनि उनी हुन् ।
२०४१ सालमा नेकपा (चौथो महाधिवेशन) मा फूट आयो । उनी नेकपा (मसाल) का महामन्त्री भए । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म महामन्त्री नै छन् । उनको पार्टी अर्द्ध–भूमिगत छ । संसदीय मोर्चाका रुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा खुल्ला छ ।
पहिले दैनिक १८ घन्टासम्म लेखपढ गर्थे उनी । अहिले त्यसलाई १२ घन्टामा झारेको बताउँछन् । अहिले 'जलजला' भन्ने उपन्यास लेखिरहेका सिंह त्यसैका लागि आवश्यक 'रेफरेन्स’ पुस्तक पढ्छन् । जीवनमा उनले ९ वर्ष जेलजीवन बिताएका छन् ।
अहिले सत्तारुढ नेकपा चरम विवादमा फसेको छ । यद्यपि उनी नेकपालाई कम्युनिष्ट मान्दैनन्, वामपन्थी दल भने मान्छन् । विभाजन नै विभाजनको इतिहास व्यहोरेको नेकपाको यो विवादलाई उनले कसरी हेरेका छन् त ? अर्द्ध–भूमिगत नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता:
तपाईं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ०१९ सालको पहिलो विभाजनदेखि अनेकौँ टुटफूट व्यहोरेको एक जना पाको नेता हुनुहुन्छ । नेकपाको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के कारण हटाउन खोजिएको हो ?
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहितको नक्साको जो विवाद आयो, त्योभन्दा पहिलादेखि नै नेकपाभित्र विवाद थियो । ओलीको राजीनामा माग्ने काम भइरहेको थियो । यो त्यसैको निरन्तरता हो ।
लिम्पियाधुरासमेतको नक्साको जुन विवाद आयो, त्यसमा ओली सरकारले केही अडान लियो । त्यो ओलीको व्यक्तिगत अडान होइन । उनको सम्पूर्ण पार्टीको निर्णय हो । त्यो गरिसकेपछि उनको विरोधमा भारत सरकार, त्यहाँका मिडिया ओलीमाथि सबै वर्षेका छन् । उनलाई हटाउन षड्यन्त्र पनि गरेका छन् । यो त भारतको पहिलेको पनि प्रवृत्ति हो । नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा कसैले आवाज उठायो भने त्यहाँ गएर उसलाई अपदस्थ गर्ने प्रयत्न गर्ने कुरा नयाँ होइन ।
पहिले (ओलीको अघिल्लो कार्यकाल) खासगरी चीनसित पेट्रोलियम, यातायात, पारवहन सम्झौता गरेपछि भारतले उनलाई अपदस्थ नै गराए– एमाले र माओवादीका बीचमा फूट पारेर । अहिले पनि त्यही गरिरहेको छ, उसले । ओली उनीहरुलाई असहज भएको छ । त्यस कारण उनलाई हटाउन खोजेका छन् ।
संयोगले यी दुवै प्रकरण मिसिए । नेकपाभित्रको विवाद भारतसँग भन्दा पहिलेदेखि नै थियो । खास गरी यसको मूल कारण ओलीको गलत प्रकारको कार्यशैली हो । गतल प्रकारको भूमिका हो । संगठनमा पनि सही कार्यशैली अपनाएनन् । सरकारको सञ्चालनमा पनि सही प्रकारको कार्यशैली अपनाएनन् । दुवैको विरोधका पृष्ठभूमि र कारण बेग्लाबेग्लै छन् । अहिले संयोगले त्यो मिसिएका छन् ।
त्यसैले भारतले नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोधबाट पनि फाइदा उठाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । मूल रुपमा यसको प्रवृत्ति दुइटै छ । पृष्ठभूमि बेग्लाबेग्लै छन् ।
नेकपाको विवादबाट भारतले फाइदा उठाएको कि भारतको एजेन्डामा नेकपाभित्रबाट घेराबन्दी भएको ?
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा त अहिले उठेको हैन, पहिले पनि उठेको थियो । कालापानी क्षेत्रको विषयमा जुन निर्णय ग¥यो, त्यसभन्दा पहिले पनि आवाज उठेको थियो । भारतले विरोध ग¥यो, त्यसैले यिनले आवाज उठाए भन्ने चाहिँ होइन । पहिलेदेखि नै विरोध थियो, भारतले यसबाट फाइदा उठाउने कोशिश गरेको हो ।
नेकपाभित्रको विवाद त दुई महिनाअघि आत्मालोचना गरेर टुंगो लगाइसकेका थिए, अहिले त मदन भण्डारीको जन्मदिनमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा भारतले मलाई हटाउने षड्यन्त्र गर्‍यो भनेपछि फेरि बल्झिएको देखिन्छ नि त !
उठ्दै बीच–बीचमा 'ड्रप’ हुँदै आएको छ । विवाद उत्पन्न भएका छन्, फेरि त्यसमा केही सामञ्जस्यता आउने गरेको छ । यो क्रम निरन्तर चलेको छ । त्यसैले भारतले त्यो उठाएका कारण यो उठेको भन्न मिल्दैन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेकपाभित्र अहिले मात्र होइन, पार्टी एकता भएदेखि नै निरन्तर अन्तर्विरोधहरु चलिरहेका छन् । को अध्यक्ष हुने, को प्रधानमन्त्री हुने आलोपालो गर्ने कि के गर्ने भन्ने पहिलेदेखिको विरोध हो । यो त्यसैको निरन्तरता हो ।
तपाईं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७१ वर्षको इतिहासमा करिब ६५ वर्षदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । दुई पार्टी मिले तर अध्यक्ष पनि दुई जना भए । तपाईंले भन्नुभो– नेकपाको विवाद पदको हो । त्योबेलादेखि अहिलेसम्म हुने कम्युनिष्ट पार्टीमा हुने विवादका प्रकृति उस्तै छन् कि फरक ?
यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति त मधेशवादीहरुमा देखा परेको छ । पाँच–छ जना अध्यक्ष हुनेसम्म भए त्यहाँ । नेकपामा दुईजना अध्यक्ष भए । यो त सैद्धान्तिकभन्दा पदले काम गरेको छ ।
यसको कारण ओलीको गलत व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी कार्यप्रणाली हो । यसबाहेक यो विवाद पदका लागि गुटबन्दी पनि हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन त्यो । त्यो पनि गलत प्रकारको कार्यप्रणाली नै हो । त्यो पक्षले पनि काम गरेको छ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ।
त्यसले अहिले पनि काम गरेको छ । राजनीतिक र सैद्धान्तिक कारण हो भन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठाले काम गरेको सत्य हो ।
पहिलोपल्ट तेस्रो महाधिवेशनबाट ०१९ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा तपाईं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो महाधिवेशन ०१४ सालदेखि नै विवाद भएको थियो । त्यसबेलाका विवाद र अहिलेको विवाद उस्तै छन् कि फरक ?
यसमा फरक छ । ०१४ सालमा द्वितीय महाधिवेशन भयो । त्यो बेला म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ । त्यसबेलादेखि तीन–चार वर्षसम्म लगातार विवाद भयो– रायमाझीसँग । उनको राजावादी ट्रेण्ड, संविधानसभाविरोधी ट्रेण्डका विरुद्ध हामीले लगातार संघर्ष गर्‍यौँ । त्यसैको परिणामस्वरुप हामीले ०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन भयो । उनलाई कारवाही गर्‍यो ।
तेस्रो महाधिवेशन हुँदा म जेलमा थिएँ । सहभागी हुन पाइनँ । मलाई महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको पोलिटब्युरो निर्वाचित गरेको थियो । त्योबेला माझी (केशरजङ्ग रायमाझी) का विरुद्धको संघर्ष व्यक्तिगत थिएन । पदको लागि थिएन । उनको राजावादी ‘ट्रेन्ड’ का विरुद्ध संघर्ष थियो ।
महाधिवेशनपछाडि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्तर्विरोध अगाडि बढेन । तुलसीलाल–पुष्पलालबीचमा सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत पदका लागि झगडाहरु भए । त्यसको पारिणामस्वरुप पार्टी कैयौँ टुक्रामा बाँडियो । एउटा केन्द्रको विघटन भयो ।
पछि फेरि मनमोहन (अधिकारी), शम्भुराम (श्रेष्ठ), निर्मल लामा सबै मिलेर केन्द्रीय ‘न्यूक्लियस’ बनायौँ । चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यसरी हेर्दा के भने त्यसबेला माझी (रायमाझी) सँग फूट भयो, त्यो सैद्धान्तिक विषय थियो । पार्टीलाई राजावादी भड्कावमा जानबाट रोक्नका लागि फूट भएको थियो । आवश्यक पनि थियो ।
पहिलाका विवाद गुटगत कम हुन्थे, विषयगत हुन्थे । त्यसैले केन्द्रीय सदस्यमात्रै हुँदा पनि तपाईंले राख्नुभएको संविधानसभाको प्रस्ताव महाधिवेशन हलबाट पारित भएको थियो नि, हैन ?
त्यो द्वितीय महाधिवेशनमा होइन त्यो । द्वितीय महाधिवेशनमा त संविधानसभा सर्वसम्मत थियो । माझीहरुसहित पुष्पलाल, हामीहरु सबै एक मत थियौँ । सबै पार्टीको एकमत थियो, त्यसबेला । विवाद यत्ति थियो– वैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने कि गणतन्त्रमा जाने ।
दरभंगा प्लेनममा आएर त्यो मतभेद पैदा भयो । त्यो केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक थियो । ०१८ सालको अन्तिमतिर, ०१९ सालको सुरुतिर भएको हो । त्यसमा संविधानसभाको विवाद उठ्यो ।
त्यसबेला त मुद्दाका आधारमा मतभेद हुन्थ्यो । अहिले त पार्टीका गुट धर्म ग्रहण गरेजस्तै छ नि ? यसको कारण के हो ? यो देख्दा कस्तो लाग्छ ?
त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र, चिन्तन र दृष्टिकोणमा धेरै स्खलन भएर गएको छ । त्यसबेला कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्र होइन, कांग्रेसमा पनि जो लाग्थे, देश र जनताको सेवा भावनाले लाग्थे । गणेशमान, बीपी वा त्यो बेला पहिलो पिंढीका जो लागे, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उनीहरु लागेका होइनन् । उनीहरु देश र समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि लागेका हुन् । कम्युनिष्टको मात्र कुरा गर्दैनौँ हामीले ।
पुष्पलाल, मनमोहन त्यो पिढीका साथीहरु जो कम्युनिष्ट पार्टीमा लागे, सैद्धान्तिक आस्थाका आधारमा लागेका हुन् । पछि त्यसमा विकृति आउँदै गयो । सिद्धान्त, नीति, आस्थाभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भन्ने दृष्टिकोण पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्न थाल्यो । सैद्धान्तिक चिन्तनमा स्खलन हुन थाल्यो । त्यसको असर कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि पूरा प¥यो । सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत फाइदा, स्वार्थका लागि काम गर्ने, पदका लागि झगडा गर्ने प्रवृत्ति देखा प¥यो ।
त्यो प्रवृत्ति आज नेकपामा तपाईं देख्नुहुन्छ । उनीहरुको बीचमा जो संघर्ष र मतभेद देखापरेको छ, त्यो सैद्धान्तिक राजनीतिक मात्र होइन । पद, प्रतिष्ठाको लागि पनि हो । त्यस कारण त्यहाँ गुटबन्दी हुने गरेका छन् ।
नेकपाभित्रका धेरै नेताहरु तपाईंकै स्कुलिङबाट आएका पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु पहिले 'उग्र–क्रान्तिकारी’ अनि अहिले चाहिँ 'घोर दक्षिणपन्थी’ जस्तै आचरण र जीवनशैली छ ! यस्तो कसरी हुन्छ ? कम्युनिष्ट दर्शनले कसरी व्यख्या गर्छ यसलाई ?
मालेको विश्लेषण गर्ने बेलामा हामीले 'उग्रवामपन्थी विचारधाराका खण्डन’ भन्ने किताबै लेखेका थियौँ । पछि महाधिवेशनमा पनि हामीले थुप्रै किताब र लेखहरु लेखेका छौँ । उनीहरुको जो कार्यविधि हो, त्यो उग्रवामपन्थी हो । त्यो गलत छ ।
उग्रवामपन्थी कार्यविधिको स्रोत हुन्छ– वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण नगरी आत्मगत चिन्तनको आधारमा निर्णयमा पुग्ने । यो छिपछिपे हचुवा प्रकारको तरिका हो । यस प्रकार मान्छे जति सजिलै उग्रवामपन्थी भड्कावमा जान्छन्, त्यत्ति सजिलै उनीहरु दक्षिणपन्थी भड्कावमा पनि जान्छन् ।
हामीले त्यहीबेला विश्लेषण गरेका थियौँ । उनीहरुमा छिपछिपे हचुवा र आत्मगत तरिका जो देखा पर्‍यो, त्यसको परिणाम स्वभाविक रुपमा दक्षिणपन्थी दिशा लिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले उनमा उग्रवामपन्थी भड्काव र पछि गएर दक्षिणपन्थी भड्काव देखा पर्‍यो । त्यही रुपमा अहिले पनि उनीहरु देखा परेका छन् । अब माक्र्सवादी–लेनिनवादी चिन्तनबाट उनीहरु विचलत भयो । संगठन प्रणाली पनि एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिष्टको जस्तो छैन ।
उनीहरुका बीचमा मतभेद छन्– कैयौँ कुरा । ती मतभेद एउटा कम्युनिष्ट पार्टीमा देखा पर्ने मतभेद हैनन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा मतभेद भए पनि त्यो सार्वजनिक गर्ने तरिका हुँदैन । बहुमतको कुरा मानेर जाने हुन्छ । तपाईं देख्नुहुन्छ– सबै मत सार्वजनिक आएका छन् । एउटाले अर्काको आलोचना गर्छन् । यो कम्युनिष्टको पद्धति होइन ।
त्योबाहेक पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ– त्यसलाई मान्नुपर्ने जरुरत छैन । पार्टीले निर्णय गर्छ– ओलीले अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् । ओली त्यसबाट बचेर आफ्नै किसिमले जाने प्रयत्न गर्छन् । पार्टीको निर्णयको कुनै महत्व छैन । यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिष्ट पद्धतिबाट विचलन हो ।
राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र उनको विचलन भएका छैन, संगठनात्मक पद्धतिबाट समेत उनको विचलन भएको छ । आज उनीहरुको संगठनात्मक प्रणाली नेपाली कांग्रेस जस्तो खुला प्रकारको छ । अनुशासन छैन । नियम छैन ।
पार्टी निर्णयको कुनै अर्थ छैन । जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कुनै चिज छैन । त्यसले के बताउँछ भने उनीहरु राजनीतिक रुपबाट मात्र होइन, संगठनात्मक कार्यविधिको दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिष्ट प्रणालीबाट धेरै विचलन भइसकेको प्रष्ट हुन्छ । उनीहरु कम्युनिष्ट होइनन् ।
एउटा व्यक्तिगत प्रश्न, तपाईं अहिले पनि भूमिगत, अर्द्ध–भूमिगत हुनुुहुन्छ । यसको कारण के हो ? कहिलेदेखि सार्वजनिक हुने ?
हामी सार्वजनिक हुने–नहुने भन्ने पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ । पार्टीलाई मूल रुपमा भूमिगत राख्ने हाम्रो निर्णय छ । अहिले पनि पार्टी खुला रुपमा आएको छैन । को के रुपमा छ, त्यो खुला गर्दैनौँ । वैधानिक मोर्चा खुला छन् । कामरेड चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अरु साथीहरु छन् त्यसमा ।
चार दशकदेखि एउटै छ– नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह । गणतन्त्र आइसक्यो, अब कुनै ‘थ्रेट’ बाँकी छैन तर पनि तपाईं किन भूमिगत ?
पार्टीलाई भूमिगत राख्नुको हाम्रो उद्देश्य के हो भने संसदीय प्रणाली जो छ, त्यसैमा संलग्न हुनु, त्यसमा भाग लिनु मात्र हाम्रो हाम्रो कार्यदिशा होइन । हाम्रो उद्देश्य यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने हो ।
संसदीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याएर नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनु हो । यो दीर्घकालीन प्रकारको उद्देश्य छ । त्यस कारण पार्टी संरचनालाई भूमिगत राखेका छौँ । खुला गतिविधिमा सामेल हुन वैधानिक मोर्चा बनाएका छौँ ।
पार्टीको महामन्त्रीको हिसाबले म भन्छु– मेरो नाम बाहिर गयो, पद बाहिर गयो । विचारहरु बाहिर गए । अरु साथीभाइका त्यसरी जान्नन् । खाली प्रवक्ताहरुका जान्छन् । पार्टी भूमिगत छ । म त्यसको महामन्त्रीका हैसियतले अद्र्धभूमिगत छु ।
दीर्घकालीन उद्देश्य र तात्कालिक उद्देश्यका बीच सामिप्यता कायम गर्न भूमिगत र खुला प्रणालीबीच हामीले सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।
तपाईंले सोच्नुभएको त्यो उद्देश्य कहिले प्राप्त होला ?
कहिले प्राप्त होला त भन्न सकिन्न । म महामन्त्री कहिलेसम्म रहन्छु, त्यो पनि भन्न सकिन्न । यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
तपाईंमा यत्रो विश्वास छ तर नेकपा मसाल चाहिँ झन्–झन् खुम्चिँदै गएको छ ?
यसमा दुई कारण छन्– एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन । ०३१ सालतिर हाम्रो चौथो महाधिवेशन भयो । त्यो काल र अहिलेको कालमा लामो समय बितिसकेको छ । यसबीचमा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी, हाम्रो पार्टी केही खुम्चेको देख्नुहुन्छ ।
अर्को पक्ष पनि हेर्नुस् न ! विश्वको कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै खुम्चेको छ यो कालमा । सोभियत संघ थियो, समाजवादी व्यवस्था थियो । पूर्वीयूरोप सारा थियो । त्यो कति धेरै खुम्चेको छ । त्यसको असर हाम्रो पार्टीमा पनि परेको छ ।
दोस्रो, खाली हाम्रो पार्टी मात्र खुम्चेको छैन, मान्छेको चिन्तनमा पनि विचलन आएको छ । पहिले पार्टी र पार्टीको उद्देश्यप्रति समर्पित भएर पार्टीमा आउँथे । अब कहाँ स्वार्थ पूरा गर्ने भनेर आउँछन् । त्यो पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वार्थका लागि नेकपामा लाग्छन् । यसको असर पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा परेको छ ।
अर्को असर जनतामा परेको छ । त्यस्तो बेलामा जनताले स्वविवेकले निर्णय गर्छन् । अब जनता पनि त्यस्ता छैनन् । चुनाव आयो, कहाँ पैसा पाइन्छ, कहाँ पद दिन्छन् हेर्छन् ।
अनि जनता जगाउने काम कम्युनिष्ट पार्टीको होइन ?
यो सबैको असर कम्युनिष्ट पार्टीमा पर्‍यो । हाम्रो शक्ति कम र बेसी हुनुका अगाडि जनताको चेतना र जनताको समर्थनमाथि भर पर्छ । जनताको समर्थन हुन्छ, हामी शक्तिशाली हुन्छौँ । जनताको समर्थन कम हुन्छ, हामी कमजोर हुन्छौँ । कार्यकर्तामा बढी समर्पणको भाव हुन्छ, हामी शक्तिशाली हुन्छौँ, कार्यकर्तामा अलिकति स्खलनको भावना आउँछ, हामी कमजोर हुन्छौँ ।
विश्वमा नै जो परिवर्तन आएको छ, कम्युनिष्ट आन्दोलनको भौतिक रुपमा मात्र होइन, चिन्तन र जनआधारमा पनि बुर्जुवा प्रकारको संस्कृतिको जो असर परेको छ । ती सबैको असर कम्युनिष्ट पार्टीमा परेको छ ।
युरोपमा हेरौँ, कम्युनिष्ट पार्टी कति शक्तिशाली थियो । आज कुन अवस्थामा पुगेको छ । फ्रान्समा ७५ हजार गुरिल्ला थिए, ग्रीकमा २२–२५ हजार गुरिल्ला थिए, मलेसियाका मलायाहरु, ल्याटिन अमेरिका हेरौँ । यो अवधिमा संसारका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरु समाप्त भएर गए तर त्यो स्थितिमा पनि हाम्रो पार्टी कायम छ । कयौँ फूट, दुष्मनका हमलाका बाजुद पार्टी कायम छ । त्यो हाम्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
मोहन बैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी–क्रान्तिकारी) सँग पार्टी एकता वार्ता चलेको भन्ने सुनिन्थ्यो । कहाँ पुग्यो वार्ता ?
कुरा चलेको थियो हाम्रो तर एकता हुन सकेन । नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्बन्धी हाम्रा कैयौँ विचार एकै छन् । विचार मिल्छ । तात्कालिक राजनीतिमा हाम्रा धेरै मतभेद छन् ।
गणतन्त्रको पक्षमा भन्नुस् । यो गणतन्त्रलाई हामी बुर्जुवा भन्छौँ, सैद्धान्तिक रुपमा हामी त्यसलाई समर्थन गर्दैनाँै तर यो गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्नुपर्छ । यसमा प्रतिगामी हमलाको हामीले विरोध गर्नुपर्छ । उहाँले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहन्छ । मिल्दैन हाम्रो । यो संविधानलाई मूल रुपमा समर्थन गर्दैनौँ– यसमा संघीयता छ । त्यसका साथै यसमा गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता पनि छ । त्यसैले यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्छौँ । संघीयतालाई हामी विरोध गर्छौँ, उहाँहरु समर्थन गर्नुहुन्छ । मतभेदहरु छन् ।
तै पनि हाम्रो, बैद्यजी, विप्लवजी, सीपी मैनालीजी अरु सबै पक्षसँग मिलेर एउटा तात्कालिक विषयहरुमा संभव भएसम्म एकता गरेर जाने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।
तपाईं त पहिलो पुस्ताको कम्युनिष्ट नेता, नेकपाका तेस्रो पुस्ताका नेतालाई केही अर्ति–उपदेशस्वरुप केही भन्नुहुन्छ ?
त्यसलाई हामी कम्युनिष्ट पार्टी मान्दैनौँ । त्यही पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्तो प्रतिक्रियावादी संगठन होइन । त्यसलाई अझै देशभक्त र वामपन्थी मान्छौँ । त्यस कारण देशको राजनीतिमा अहिले यसको भूमिकाले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ । नेकपामा फूट हुन्छ भने त्यसको असर सरकारमा पर्छ । सरकार विघटन हुन्छ भने देशलाई प्रतिगमनतिर लैजान्छ । राष्ट्रियतामा नोक्सान पुर्‍याउँछ । देशको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
त्यस कारण हाम्रो जोड के हुन्छ भने त्योसितको हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेदका बाबजुद उनीहरुले यो एकता कायम राख्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । यद्यपि, उनीहरुका नीति र कार्यशैलीप्रति हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेद छन् । त्यसका विरुद्ध लगातार संघर्ष गर्दै जाने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: Jul 07, 2020 21:16:46
पूर्व सावधानी अपनाएर ठूलो क्षति हुनबाट जोगियो: गृहमन्त्री
विचौलिया रोक्ने उपाय खोज्न सर्वोच्चद्वारा न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन
कोरोना विशेष अस्पताल संक्रमितले भरिए, सरकारले गुहार्यो निजी अस्पताल
१ भदौदेखि पाँचौं चरणको उद्धार उडान, नेवानिलाई १५ दिनसम्म १७ उडानकाे अनुमति
पहिरोको न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने भन्नै प्रचण्डद्वारा उद्धारमा खट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन
कमला ह्यारिसको अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मेदवारीमा नयाँदिल्ली त्रसित
व्यापारीमा संक्रमण देखिएपछि विशालबजार क्षेत्र बन्द
न्युजील्यान्डमा थप १२ दिन लकडाउनकाे घाेषणा
कोरोना महामारीबीच पीएचडी अध्ययनरत सम्झनाले सुरु गरिन् चियापसल
बस्ती सार्न एक वर्षअघि नै गुहारेका थिए लिदीवासीले सरकार, प्रशासनको जवाफ थियो, 'भूगर्भविदले हेरेपछि मात्रै'
१३ वाणिज्य बैंककाे वित्तीय विवरण : कुन बैंककाे नाफा कति ?
उपचार नपाएरै बिरामीको मृत्यु, न कोरोना देखिन्छ न कारण खुल्छ
सीमित ट्राभल एजेन्सीको प्रभावमा चार्टर्ड उडान, नियमित उडान किन खुला नगर्ने ?
जुट्छन् तर जुटिरहन सक्दैनन् कांग्रेसका युवा नेता